Hotot waxay cusbooneysiineysaa isku xirkeeda xoogaa | Laga soo bilaabo Linux
Hotot waxay cusbooneysiineysaa isku xirkeeda xoogaa
Waqti ka hor ayaan kuu sheegay Kulul, macmiilka desktop for Twitter, Identi.ca y status.net iyo sidoo kale waan ka faallooday iyaga maqaalkaas, waa barnaamij qabow.
Maanta waxaan go aansaday inaan siiyo isku day cusub waxaanan si layaab leh ula yaabay in isbadalkeeda uu xoogaa badalay, halkii uu ka ahaan lahaa farshaxanka astaanta ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay dareemeysaa dheecaan badan oo dhakhso badan, waxay noo ogolaaneysaa inaan keydinno qoraalada isla markaana aan galino dhoola cadeyn. Marka waad arki kartaa waxaan ka hadlayo, horey tani waxay ahayd Kulul:
Oo hadda waxaan helnay wax sidan oo kale ah:
Kulul waxay ku jirtaa bakhaarrada ugu badan ee la qaybiyo, markaa rakibideedu waa mid aad u fudud. Gudaha Tijaabada Debian, maxaa yeelay waa inaan ku qornaa oo keliya terminaalka:
Marka waxaan siin doonaa fasax Turubka, ugu yaraan illaa nooc cusubi soo baxayo 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Hotot waxay cusbooneysiineysaa isku xirkeeda xoogaa
+1 loogu talagalay #Hotot 0.9.7.40 (Ada) -Hotot si loo raaco <° Linux # Twitter
@elav ma lihid xiriiriyaha koodhka ilaha, maadaama aan haysto Ubuntu 10.10 umana maleynayo nooca cusub inuu kujiro repo.
Isku day inaad tagto muraayadayada ISP oo aad kala soo baxdo .deb Imtixaanka Debian. Raadi nooca 1: 0.9.7.32 + git20111213.1d89daf-1 kaas oo, habka, uusan ahayn kii ugu dambeeyay, maxaa yeelay 0.9.9 wuxuu ku jiraa websaydhka Hotot
Uma isticmaalo twitter ama identi.ca, laakiin wali way fiicantahay :).
UBUNTU WAA WARAR KUNA JIRA BBC ADUUNKA WAAN KA TAGAY
Hmm, waligay ma aanan helin inaan tijaabiyo Hotot inta aan ku jiray KDE ... laga yaabee inaan isku dayi doono waqtiga soo socda, waxay umuuqataa wax fiican ...
Xaqiiqdii Hotot waa GTK ee ma ahan Qt, taasi waa sababta aanan ugu tijaabin si macquul ah, maxaa yeelay si fudud maadaama ay tahay GTK ma awoodi doonto inay beddesho Choqok-ga
Isbedelka bilicdu waa mid xiiso leh, waxaan u maleynayaa inaan markale isku dayi doono.
Iyada oo ay la socoto terminaalka: Ku soo dejiso degel dhameystiran Wget
VLC 2.0 waa la heli karaa!